सरकारी जनशक्तिको असहयोग, स्वयंसेवा गर्न आइसोलेसनका डाक्टरको अपिल – Health Post Nepal
२०७७ असार १ गते १७:१५
रोल्पामा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्ने आइसोलेसन केन्द्रले सरकारी कार्यालयबाट जनशक्ति नपाउँदा स्वयंसेवकको खोजी गरेको छ।
केन्द्रले जनशक्ति अभाव भएकाले स्वयंसेवक भएर काम गर्न इच्छुकसँग अपिल गरेको छ। प्रदेश सरकारको पहलमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहको सहयोगमा सञ्चालित उक्त आइसोलेसन केन्द्रले प्रशासनिक तथा सहयोगी कर्मचारी पटक–पटक माग गर्दा पनि स्थानीय र जिल्लास्तरबाट कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नपठाएपछि स्वयंसेवाका लागि अपिल गर्न बाध्य भएको आइसोलेसनका डा. अनिल केसीले बताए।
‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी र संक्रमित भेटिएका स्थानीय तहका प्रमुखसँग सहयोगी पठाइदिन आग्रह गरियो, तर चार दिनसम्म कतैबाट आएनन्,’ डा. केसीले भने, ‘स्थानीय तहले आर्थिक सहयोग गर्छाैं, आफै खोज्नुस् भन्नुभयो। हामी यस्तो बेलामा मान्छे खोज्न कहाँ जाने ?’
हाल आइसोलेसनमा एक डाक्टरसहित ३ स्वास्थ्यकर्मी, एक कार्यालय सहयोगी र एक स्टोर तथा कम्प्युटर हेर्ने कर्मचारीमात्र छन्। आइतबार मात्रै आइसोलेसन केन्द्रले स्वयंसेवा गर्न अपिल गरेपछि सोमबार सदरमुकाम लिबाङका ६ युवाले आइसोलेसनमा थप बेड जडान कार्यमा सहयोग गर्न आएको डा. केसीले जानकारी दिए।
रोल्पाका १० स्थानीय तहको सहयोग रहनेगरी सदरमुकाम लिवाङस्थित जलजला बहुमुखी क्याम्पसमा ५० शैय्याको अस्थायी कोभिड–१९ आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरिएको हो। रोल्पामा पहिलो पटक जेठ २५ गते ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै दोस्रो पटक १४ र तेस्रो पटक १७ जनामा देखिएको थियो।
हालसम्म जिल्लाको रोल्पा नगरपालिका ५ र सुनील स्मृति गाउँपालिका २९ गरी जम्मा ३४ जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमितमध्ये २१ जनाको आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ भने अन्यलाई पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
प्रदेश ५ का अन्य जिल्लामा स्थानीय तहले आफैं आइसोलेसन सञ्चालन गरे पनि जिल्ला स्तरीय आइसोलेसन रोल्पामा मात्रै हो। तर ३ तहकै सरकारले बेवास्ता गर्दा आइसोलेसन सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ।
रोल्पामा हालसम्म ९ सय २७ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको भएता पनि हालसम्म ४ सय ६३ को मात्र रिपोर्ट आएको छ।
One thought on “सरकारी जनशक्तिको असहयोग, स्वयंसेवा गर्न आइसोलेसनका डाक्टरको अपिल”
Dr ko num pauna sakinxa hola